IBitrix24: I-Swiss Army Knife Yokusebenzisana Kwebhizinisi | Martech Zone
IBitrix24: I-Swiss Army Knife Yokusebenzisana Kwebhizinisi
NgeSonto, ngoJuni 14, i-2015 NgoMgqibelo, Juni 13, 2015 Douglas Karr
Amathimba wokumaketha kaningi kuneqembu elihlukile labakhangisi bangaphakathi, izinsizakusebenza ze-ejensi yangaphandle, kanye nabasebenza ngokuzimela okungenzeka basebenza emahhovisi emhlabeni wonke. Sibe nenqwaba yamapulatifomu asizile ngalokhu - kusuka kumadrayivu abiwe nge-inthanethi, amapulatifomu wenethiwekhi yokuxhumana nomphakathi, amakhalenda abiwe, nokuningi… futhi ngenkathi amathuluzi amaningi enokuhlanganiswa, cishe wonke amathuluzi weqembu lezentengiso abukeka njengesilo esikhulu Frankenstein esikhundleni se-suite ehambisanayo.
I-10% isephulelo sokubhaliselwe konyaka kweBitrix24
I-Bitrix24 inikeza ukuhambisana okuphelele kokusebenzisana komphakathi, amathuluzi wokuxhumana nokuphatha wezinhlangano. Nayi ividiyo yokubuka konke:
Izici zeBitrix24 zifaka
Inethiwekhi Yokuxhumana - Inethiwekhi yokuxhumana yangaphakathi ikuvumela ukuthi uhlanganyele kalula, ngokushesha nangokushesha. Thola impendulo esheshayo, yabelana ngemibono, dala amaqembu omsebenzi futhi uhlanganyele nabasebenzi bakho.
Imisebenzi namaphrojekthi - Kusuka kumaToDo akho kanye nemisebenzi elula kumaphrojekthi ayinkimbinkimbi.
Ingxoxo yeqembu nevidiyo - Amathuluzi wokuxhumana wesikhathi sangempela kusuka kwinkomfa yevidiyo engxoxweni yeqembu.
Ukuphathwa kwedokhumenti - Isitoreji sedokhumende esivikelekile ku-inthanethi, ukugeleza kokusebenza kwabasebenzisi abaningi ku-inthanethi nokuhamba kwemvume yangokwezifiso. Yabelana ngamafayela namafolda kalula nabantu osebenza nabo, futhi ufinyelele idatha yakho kunoma iyiphi idivayisi.
Ikhalenda nokuhlela - Mema ozakwabo emhlanganweni, hlela ama-aphoyintimenti namakhasimende ngqo kusuka ku-CRM, zenzele amakhalenda azimele futhi owabelwe wona, amaqembu okusebenzela, noma yonke inkampani.
imeyili - Finyelela i-imeyili ngqo kusuka ku-akhawunti yakho yeBitrix24.
Ukuphathwa kweqembu le-CRM nokuthengisa - Kusuka kumininingo egciniwe yamakhasimende ukuthengisa nge-imeyili nokunikezwa okuzenzakalelayo kokuhola.
Ucingo - Shayela amakhasimende akho kanye nabantu osebenza nabo kusuka ku-portal yakho ngokuchofoza okukodwa. Ngena futhi urekhode izingcingo ngqo ngaphakathi kweCRM. Ungasebenzisa iBitrix24 njengesikhungo sokushaya izingcingo.
Ukuphathwa Kwezimali Zabantu - Isikhombisi sabasebenzi, ishadi lokungabikho, ingosi yokuzenzela, ukuphathwa kwesikhathi, imibiko yomsebenzi, isisekelo solwazi namanye amathuluzi akwa-HR + angama-20.
Hambayo - isebenza ku-iPhone yakho, i-iPad noma i-Android nayo. Ungathatha i-akhawunti yakho ye-Bitrix24 nefoni noma ithebhulethi yakho futhi kuyohlala kukuthepha okukodwa kuphela.
Okuningi - i-eLearning, ideski losizo, ukuphathwa kwamarekhodi, i-Company Pulse, i-Bitrix24.I-Network, i-Marketplace, API ngisho nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe.
Ukudalula: Sisebenzisa isixhumanisi esihambisanayo kulokhu okuthunyelwe okunikezwayo 10% isephulelo sokubhaliselwe sonyaka seBitrix24.
Tags: i-bitrix24ikhalendaCRMukuphathwa kobudlelwano bamakhasimendehrumnyango Wabasebenziingosi yokuxhumana nabantu yangaphakathiukubambisana kweselulaUkuhlelaUkuphatha iphrojekthiukuphathwa komsebenzi
Ukuthi Ukuzibandakanya Kwe-imeyili Kuqhathanisa Kanjani Nokuzibandakanya Komphakathi